HomeKnowledgeမေးစေ့နှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းကို လျှော့ကျစေပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခု
သင်ဟာ အဝလွန်သူတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မှန်ကြည့်တဲ့အခါ မေးနှစ်ထပ် ဖြစ်နေခြင်းက အတော်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးအောက်ဘက် တစ်ဝိုက်မှာ အဆီပိုတွေ ရှိနေခြင်းက အဝလွန်မှု တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
1. အစားလျှော့စားတာ နည်းလမ်းမမှန်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္ထုတွေက အသားအရေအတွက် အာဟာရ မဖြစ်စေပါဘူး။ အဲဒီအခါ မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရဆိုးစေပါတယ်။
2. အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ အရေပြားက ဆန့်နိုင်ကျုံနိုင်တဲ့ သတ္တိတွေ အားနည်းလာပြီး မေးနှစ်ထပ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။
3. ကိုယ်နေဟန်ထားမမှန်တဲ့အခါ မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ အားနည်းလာပြီး မေးနှစ်ထပ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။
အစားအသောက်နဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို ပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် အသက်အရွယ်ကြီးလာတာကိုတော့ ရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။ မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းက ကြွက်သားတစ်သျှူးတွေကို ဖြေလျှော့ပေးပြီး မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်တာကို လျော့ကျစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ခင်မှာ လည်ပင်းကို တစ်ဖက်စီ ညင်သာစွာလှည့်ပေးခြင်းဖြင့် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ခေါင်းကို မော့လိုက်၊ ငုံ့လိုက် လုပ်ပေးပါ။
တင်းနစ်ဘောလုံး ဒါမှမဟုတ် ပန်းသီးတစ်လုံးကို ယူပါ။ အဲဒါတွေ မရှိရင် သင့်ရဲ့လက်သီးဆုပ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တင်းနစ်ဘောလုံးကို မေးစေ့အောက်မှာ ထားပြီး ရင်ဘတ်ပေါ်ထိ နာနာဖိပေးပါ။ တင်းနစ်ဘောလုံးကို တွန်းဖို့ လည်ပင်းကြွက်သားတွေကို အသုံးပြုပေးပါ။
ခေါင်းကိုမော့ကာ မျက်နှာကြက်ကိုကြည့်ပြီး ပါးစပ်ကို ဟထားပါ။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် လုပ်ပေးပါ။ ဒီလေကျင့်ခန်းကိုတော့3စက္ကန့်ကနေ5စက္ကန့်ကြာအောင် လုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
မေးကိုမော့ပြီး ပါးထဲကို လေစုပ်ယူလိုက်ပါ၊ အဲဒီအခါ မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကြွက်သားတွေ တင်းလာတာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို 10 စက္ကန့်ကနေ စက္ကန့် 20 ကြာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို နေ့တိုင်းလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်နှာကြွက်သားတွေ ကြံ့ခိုင်သန်မာ လာစေပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ မလိုချင်တဲ့ မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်မှုကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။
မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကလည်း တခြားခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့လည်း ကျန်းမာဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို နေ့စဉ် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ငယ်ရွယ်နုပျို ကျန်းမာမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။